Ny zava-drehetra momba ny Mobile World Congress 2021 - Androidsis | Androidsis (Pejy 2)
Fantaro bebe kokoa momba ireo telefaona hasehon'ny Energizer ao amin'ny MWC 2019, izay mitontaly 26, izay valo no efa fantatsika.
Energizer hamoaka telefaona 18.000 mAh ao amin'ny MWC 2019
Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona izay hatolotr'i Energizer ao amin'ny MWC 2019, miisa 26 ao anatin'izany ny finday avo lenta.
Sony hamoaka telefaona vaovao ao amin'ny MWC 2019
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanamafisana fa ho avy ao amin'ny MWC 2019 i Sony izay hanolorany amin'ny fomba ofisialy ny findainy vaovao.
Samsung dia hanolotra ny telefaona 5G ao amin'ny MWC 2019: izy io no ho variana mandroso indrindra amin'ny Galaxy S10
Nisy tatitra vaovao iray nanamarika fa Samsung dia hanambara ny fitaovany 5G ao amin'ny Mobile World Congress 2019, izay hatao any Barcelona, ​​Espana.
Voamarina: Oppo hanala sarin-tsarimihetsika mihetsiketsika ao amin'ny MWC19
Ofisialy: Raha ny filazan'ny CEO an'ny Oppo dia hanolotra finday avo lenta finday ao amin'ny Kongresin'ny World Mobile 2019 ny orinasa.
Vao nanambara i Huawei fa hampiditra ny telefaona 5G voalohany ao amin'ny Mobile World Congress amin'ny taona 2019. Ity ny pitsopitsony.
DOOGEE V: Ny sainan'ny marika vaovao natolotra tao amin'ny MWC 2018
DOOGEE V: Famelabelarana avo lenta ao amin'ny MWC 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana telefaona marika amin'ny hetsika malaza.
ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 ary 5 Lite: Telefaona ASUS naseho tao amin'ny MWC 2018
ASUS Zenfone 5Z, Zenfone 5 ary 5 Lite: vidiny fandefasana famaritana. Fantaro bebe kokoa momba ireo telefaona natolotry ny marika ao amin'ny MWC 2018.
Jereo ny telefaona Android Go aseho amin'ny MWC 2018
Finday Android Go naseho tao amin'ny MWC 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona mampiasa ny kinova maivana amin'ny rafitra fiasa asongadin'ilay hetsika malaza.
Wiko Tommy 3, Lenny 5 ary Jerry 3: Ny farany ambany amin'ny marika amin'ny Android Go
Wiko Tommy 3, Lenny 5 ary Jerry 3: Famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ireo telefaona farany ambany telo avy amin'ny marika frantsay.
Snapdragon 700: mahatratra ny finday avo lenta finday mora indrindra ny faharanitan-tsaina
Snapdragon 700: mahatratra ny finday avo lenta finday mora indrindra ny faharanitan-tsaina. Hijery misimisy kokoa momba ny fianakaviana processeur vaovao an'ny marika.
LG dia manolotra ny K10 sy ny K10 Plus, terminal farany ambany roa
Ny orinasa Koreana LG dia nanolotra fantsona vaovao roa ao amin'ny MWC ho an'ny farany ambany amin'ny tsena: ny LG K10 sy ny LG K10 Plus
Hoox K31: Finday azo antoka indrindra ho an'ireo orinasa aseho ao amin'ny MWC
Hoox K31: finday azo antoka indrindra ho an'ireo orinasa aseho ao amin'ny MWC. Fantaro bebe kokoa momba ity telefaona azo antoka ity izay efa natolotra tamin'ny hetsika malaza.
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny MWC60 ny MediaTek P18
Ny MediaTek P60 dia natolotra tao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona izay natao nanomboka ny 25 febroary. Ny orinasan'ny Taiwaney dia miantoka azy ho toy ny processeur haingana indrindra sy mahomby indrindra amin'ny andiany P, ary ho azo amin'ny faran'ny taona faharoa amin'ity taona ity. Lazainay anao daholo ny momba azy!
Jereo ny tampon'ilay seho vaovao natolotr'i Sony tao amin'ny MWC, ny Sony Xperia XZ2 ary ny kinova kely mitovy ihany nefa kely kokoa, ny Sony Xperia XZ2 Compact
Leagoo, iray amin'ireo orinasa aziatika izay niavaka indrindra tato anatin'ny volana vitsivitsy, dia manana ny toerany ao amin'ny MWC izay nanolorany ireo terminal vaovao roa: Leagoo S8 sy Leagoo Power 5
Ireto ny telefaona Android One natolotra tao amin'ny MWC 2018. Ianaro bebe kokoa momba ireo telefaona natolotra tamin'ny hetsika niaraka tamin'ity kinalan'ny rafitra fiasa ity.
Iray amin'ireo tsy ampoizina tsy nampoizina nitranga vokatry ny kaongresy eran-tany Mobile izay efa nanomboka ny 25 febroary tao an-tanànan'i Barcelona, ​​Espana, dia ny fanolorana ny LG V30S ThinQ, V30 nohavaozina miaraka amin'ny tsara indrindra ny faharanitan-tsaina artifisialy sy miaraka amin'ny fanatsarana maro izay ho tsipiriany.
UleFone T2 Pro sy Ulefone X: Famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ireo telefaona vaovao natolotry ny marika sinoa ao amin'ny MWC 2018.
Samsung dia efa nandefa tao amin'ny fantsona YouTube ny horonantsary voalohany an'ny Galaxy S9 vaovao, terminal izay mamely ny tsena hamafa fakan-tsary miaraka amin'ny fakantsary, misaotra ilay shutter miovaova.
Samsung Renove: ny rafitra fihenam-bidy ho an'ny Galaxy S9. Fantaro bebe kokoa momba ity programa fihenam-bidy ity izay maharitra hatramin'ny 25 martsa.
Ny habaka fitehirizana faran'izay betsaka azo alaina amin'ny alàlan'ny karatra microSD ao amin'ny Galaxy S9 dia 400 GB, habaka mihoatra ny ampy handrakofana izay ilaina rehetra.
ZTE Temp Go: Famaritana ny smartphone vaovao miaraka amin'ny Android Go
ZTE Temp Go: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny telefaona vaovao an'ny marika izay hiasa amin'ny Android Go.
Jereo ny smartphone Nokia dimy naseho tao amin'ny MWC 2018
Nokia: Smarthpones natolotra tao amin'ny MWC 2018. Jereo bebe kokoa momba ireo telefaona natolotry ny marika tamin'ny hetsika tao Barcelona androany.
Taorian'ny tsaho efa ho herintaona dia nesorinay ihany ny fisalasalana ary efa fantatray izay toetrany sy fomban'ilay sainan'i Samsung vaovao: Galaxy S9
Alcatel dia manolotra ny andiany 1, 3 ary 5 vaovao ao amin'ny MWC 2018
Alcatel dia manolotra ny andiany 1, 3 ary 5 vaovao ao amin'ny MWC 2018. Fantaro misimisy kokoa ny amin'ireo faritra vaovao amin'ny marika efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Ny telefaona finday Android Go voalohany dia hanomboka amin'ny MWC 2018
Ny finday finday Android Go voalohany dia ho tonga ao amin'ny MWC 2018. Jereo bebe kokoa momba ny vaovao nambaran'i Google momba ny kinova maivana amin'ny rafitra fiasa.
Huawei MediaPad M5 10 Pro: takelaka Huawei izay tonga ao amin'ny MWC 2018
Huawei MediaPad M5 10 Pro: Tablet Huawei ho an'ny MWC 2018. Fantaro bebe kokoa momba ity takelaka vaovao ity avy amin'ny marika sinoa izay ho tonga ao amin'ny MWC 2018.
Ny sary voalohany an'ny ZenFone 5 dia voasivana, izay haseho ao amin'ny MWC
Herinandro alohan'ny fampisehoana ny laharana ZenFone 5, ny sary voalohany an'ny iray amin'ireo terminal izay ho anisan'ity faritra Asus vaovao ity ho an'ny taona 2018 dia vao nasiana sivana.
ASUS Zenfone 5 dia haseho amin'ny MWC 2018
ASUS dia hanolotra amin'ny fomba ofisialy ny Zenfone 5 ao amin'ny MWC 2018. Fantaro bebe kokoa momba ny daty fampisehoana ireo telefaona vaovao an'ny marika.
Huawei MediaPad M5. Fantaro ny endrik'ilay takelaka ho hitantsika ao amin'ny MWC!
Huawei dia manomana ny MediaPad M5 manaraka, ilay takelaka izay hisolo ny MediaPad M3 izay natolotra tao amin'ny IFA tany Berlin tamin'ny taon-dasa. Hotantarainay aminao ny momba azy rehetra ary hasehonay anao ny endriny!
Ny Xiaomi Mi 7 dia azo aseho amin'ny MWC 2018
Xiaomi dia afaka manolotra ny Xiaomi Mi 7 ao amin'ny MWC 2018. Jereo bebe kokoa momba ny fanamafisan'ny orinasa ny fahatongavany tamin'io hetsika io.
Ny angona vaovao dia manondro fa ny telefaona Xperia XZ1 Premium, Z1 Plus ary XZ1s dia tsy hahita ny jiro mandritra ny CES 2018, na dia efa misy aza ny tsaho momba azy ireo.
LG G6, ity ny efijeryo
Atorinay anao ny pitsopitsony rehetra momba ny efijery mahavariana an'ny LG G6 izay misongadina amin'ny fananana endrika 18: 9 sy ny haitao Full Vision
LG Watch Sport, ny fiambenana ho an'ny atleta be indrindra
Raha ampitahaina tamin'ny taona lasa, ity edisiona farany an'ny Mobile World Congress ity dia tena nahena tokoa. Porofon'izany ny ...
Miresaka amin'i Jia Wei, talen'ny marketing an'ny ZTE Spain izahay
Miresaka amin'i Yia Wei, talen'ny marketing ao amin'ny ZTE Spain izahay hanazavana ny vaovaon'ny orinasa ao amin'ny firenentsika
Ato amin'ity horonan-tsary ity dia asehonay anao ny pitsopitsony rehetra momba ny famolavolana ny LG G6, telefaona tena mahazaka tohina sy fianjerana, ankoatry ny fananana IP68
LG Watch Style, ity no famantaranandro LG vaovao
Manazava ny antsipiriany rehetra amin'ny LG Watch Style amin'ny horonantsary 3 minitra fotsiny izahay. Smartwatch tena mahaliana izay miaraka amin'ny Android Wear 2.0
Alcatel U5, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonantsary taorian'ny fitsapana ny Alcatel U5, ambaratonga fidirana izay hamely ny tsena amin'ny volana Mey amin'ny vidiny 99 euro
Androany izahay mitondra anao ny horonan-tsary iray izay anampian'i Juan Cabrera, talen'ny Product Product an'i Huawei anay ny zava-miafina rehetra an'ny ...
Niresaka tamin'i Juan Cabrera izahay, Manager Product an'ny Huawei, momba ny fandefasana azy ao amin'ny MWC17, ary koa ny fanoloran-tenan'ny Huawei amin'ny Internet of Things
Alcatel A3 ao amin'ny MWC 17
Fihetseham-po voalohany tamin'ny sary taorian'ny fitsapana ny Alcatel A3 tao amin'ny MWC 2017, telefaona midadasika misy fakan-tsary lehibe ary mpandahateny roa eo anoloana
Alcatel A5 LED fahatsapana voalohany tao amin'ny MWC 2017
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonantsary taorian'ny nanandramanao ny Alcatel A5 LED, telefaona misy fonony lamosina hazavana LED izay hahagaga anao
Moto G5, fahatsapana voalohany
Notsapainay ny Moto G5 tamin'ny horonan-tsary nandritra ny MWC 2017, telefaona antonony izay manana vatana vita amin'ny aliminioma mba hanomezana azy premium
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonan-tsary taorian'ny fitsapana ny Sony Xperia XA1 ao amin'ny MWC, telefaona antonony fa misy fakantsary tsara indrindra eny an-tsena
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonan-tsary taorian'ny fitsapana ny Sony Xperia XA1 Ultra, ny elanelam-potoana vaovao an'ny Sony izay misongadina amin'ny efijery mahavariana sy fakan-tsary matanjaka.
Moto G5 Plus, fahatsapana voalohany tao amin'ny MWC 2017
Moto G5 Plus, sary mihetsika voalohany taorian'ny fitsapana azy tao amin'ny MWC 2017. Telefaona misy vatana vita amin'ny aliminioma ary fitaovana mahaliana tena mahaliana
LG G6, notsapainay tao amin'ny MWC 2017
Notsapainay ny LG G6 tamin'ny MWC 2017, telefaona tsy ampoizina amin'ny efijery 6.7-inch tsy misy bezela sisiny sy fakan-tsary matanjaka misy zoro
Samsung Galaxy Tab S3, fahatsapana voalohany
Notsapainay ny Samsung Galaxy Tab S3, takelaka vaovao natolotra tao amin'ny MWC 2017, hanome anao ny fiheveranay voalohany an'ity fitaovana mampino ity
Manaja 6X, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei Honor 6X ao amin'ny MWC 2017. Telefaona midadasika izay manana tontonana Full HD 5.5-inch
Huawei Watch 2, fahatsapana voalohany
Ny fiheverana voalohany ny horonan-tsary momba ny Huawei Watch 2, ilay famantaranandro Huawei vaovao natolotra tao amin'ny MWC 2017 ary miavaka amin'ny fifandraisany
Doogee Piano Black dia mampiseho hozatra amin'ity MWC 2017 ity
Doogee Piano Black ao amin'ny MWC dia mampiseho fa mahavita mandefa telefaona finday amin'ny vidiny mora ny mpanamboatra: 150 euro
Huawei P10 Plus, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany tamin'ny horonan-tsary taorian'ny fitsapana ny Huawei P10 Plus, ny sainan'i Huawei vaovao natolotra tao amin'ny Mobile World Congress 2017
Ulefone Gemini Pro natolotra tao amin'ny MWC 2017
Ulefone Gemini Pro no finday avo lenta vaovao avy amin'ny orinasan-tsena sinoa Ulefone ary manana fakan-tsary avo roa heny ary fakan-tsary 10-core
Huawei P10, fahatsapana voalohany
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei P10 ao amin'ny MWC 2017, terminal manaitra iray izay miavaka amin'ny famaranana lehibe sy ny fitaovana matanjaka
Ireo no fiheverana voalohany azonay taorian'ny fitsapana ny Doogee Shoot 2, finday avo lenta misy rafitra fakan-tsary roa izay 70 euro fotsiny ny vidiny.
InnJoo dia nanararaotra ny andro farany tamin'ny MWC 2017 hanolotra ny vokatra farany misy azy: smartphone telo sy takelaka iray.
Doogee Y6 Max 3D, fahatsapana voalohany
Notsapainay ny Doogee Y6 Max 3D ao amin'ny MWC, telefaona hafa izay misongadina amin'ny efijery 6.5-inch izay ahafahanao mijery sarimihetsika amin'ny lafiny telo
Tsy ny zava-drehetra ao amin'ny MWC17 dia smartphone, ny ARCHOS dia manolotra fiara elektrika feno
ARCHOS dia manolotra fiara elektrika feno manodidina ny MWC17 izay tazonina any Barcelona
Nandritra ny MWC 2017 dia fantatray ny Huawei Watch vaovao miaraka amin'ny Android 2.0. Izahay dia mampiseho ny toetra sy ny tsy fitovizan'ny maodely roa vaovao.
Ireo finday avo lenta Nokia 5 sy Nokia 6 dia mameno ny tolotra finday finday ho an'ny fahaterahan'ny fahaterahana indray ny orinasa Finnish ao amin'ny MWC2017
ZTE dia mandefa ny findainy roa vaovao midadasika ao amin'ny Mobile World Congress 2017 any Barcelona: ny Blade V8 Mini ary ny Blade V8 Lite
Ulefone F1, ity no finday avo lenta an'ny mpanamboatra izay ho hitantsika amin'ny MWC 2017
Ulefone dia manamafy telefaona iray hafa, ny Ulefone F1, miaraka amin'ny efijery iray izay mibahana eo anoloana rehetra ary ho hita eo amin'ny Mobile World Congress (MWC 2017)
Huawei P10, Huawei ve no ho mpandresy mazava amin'ity MWC ity?
Huawei dia naneho ny karatra rehetra ananany amin'ity MWC ity. Na tsia? Ahoana raha manaitra antsika ny mpanamboatra amin'ny alàlan'ny fanomezana zavatra mihoatra ny Huawei P10 sy Huawei P10 Plus?
Ny finday avo lenta an'ny Samsung dia ao amin'ny MWC17 na dia vitsivitsy monja aza no hahita azy
Ny tsaho dia milaza fa ny finday avo lenta Samsung dia afaka mijanona ao amin'ny MWC17 na dia eo aza ny fahitana ny mpamatsy vola vitsivitsy voafidy sy mpiara-miasa aminy.
Inona no hitantsika amin'ny MWC 2.017?
Ity MWC ity dia ho tsarovana amin'ny tsy fahatongavany. Tsy ho afaka hahafantatra izay vaovao avy amin'ny Samsung na avy amin'i Xiaomi izahay. Saingy mety hisy tsy ampoizina.
LG G6 dia voasivana amin'ny loko manjelanjelatra miaraka amin'ny endriny mahafinaritra
Ny LG G6 dia hanana loko tena miavaka miaraka amin'ny mainty manjelanjelatra ary efa nasiana filalaovana ho fankatoavana ireo miandry azy.
Sivanina ny sary gazety an'ny Huawei P10 ary inona no ho voalohany amin'ny EMUI 5.1
EMUI 5.1 dia ho hita ao amin'ny Huawei P10 vaovao izay efa tafaporitsaka tamin'ny sary an-gazety alohan'ny nanolorana azy tao amin'ny MWC.
Ny Ulefone Power 2 dia haseho amin'ny MWC 2017
Ulefone Power 2 dia ho hita ao amin'ny MWC 2017, fitaovana iray izay miavaka amin'ny bateria 6.050 mAh sy ny vatany vita amin'ny aliminioma.
Ny sary gazety an'ny Moto G5 Plus dia tafaporitsaka tamin'ny andro maro tao amin'ny MWC
Andro vitsivitsy taorian'ny nanolorana ny Moto G5 sy Moto G5 Plus tao amin'ny Mobile World Congress, ny faharoa dia hita amin'ny sary an-gazety tafaporitsaka.
Ny LG G6 dia nametraka teo akaikin'ny LG G5 tamin'ity sary tafaporitsaka vaovao ity
Ity sary tafaporitsaka ity dia mametraka antsika eo alohan'ny LG G6 sy LG G5 napetraka mifanila mba hampiseho ny tsy fitovizany hita.
Samsung Galaxy Tab 3, inona koa no hanaitra antsika Samsung amin'ny MWC 2017?
Inona no zava-baovao ateraky ny Samsung amin'ity MWC 2017 ity? Haseho amin'ny farany ve ny smartphone miforitra? Ho hitantsika ve ny Galaxy S8? Ary ny takelaka Galaxy Tab S3?
Ny fandefasana farany ny Galaxy Tab S3 dia mampiseho ny takelaka misy klavier ara-batana
Andro vitsivitsy taorian'ny nanolorana azy, ny Galaxy Tab S3 dia aseho amin'ny fandefasana sivana vaovao izay ahitàna azy miaraka amin'ny klavie fizika ho namana.
Ny teaser LG G6 vaovao dia manamafy ny fanoherana ny rano indray
Ankoatra ny fanoherana ny rano an'ny LG G6, dia hanana an'io endrika 18: 9 ahafahanao milalao atiny multimedia tsy toy ny taloha.
Ny sary vaovao an'ny Galaxy Tab S3 dia mampiseho ny famaranana fitaratra
Samsung Galaxy Tab S3 dia haseho afaka andro vitsivitsy ary fitaovana lehibe manana famaranana premium.
Ulefone Armor 2 miaraka amin'ny processeur Helio P25 dia ao amin'ny MWC 2017
Ny fisian'ny Ulefone Armor 2 dia voamarina ao amin'ny MWC 2017, telefaona iray izay misongadina amin'ny fanoherany ny hatairana ary milatsaka ary koa milentika
OPPO hamoaka teknolojia fakantsary finday vaovao amin'ny finday avo lenta ao amin'ny MWC
Ny MWC dia hanana OPPO ho iray amin'ireo mpihetsiketsika miaraka amin'ny haitao vaovao momba ny fakantsary finday antsoina hoe '5x' ary mody manokana.
Ny LG G6 dia hanana fakantsary 13MP roa, iray misy zoro 125 degre
Ny LG G6 dia hanolotra sanda lehibe indray miaraka amin'ny fakan-tsary fakan-tsary roa, samy 13MP ary ny iray ho zoro 125 degre.
Tonga miaraka amin'ny lokony ireo sary an-gazety an'ny Huawei P10
Andro vitsy monja hahalalana ny zava-drehetra momba ny Mobile World Congress izay hisongadina amin'ity taona ity amin'ny fanombohana ny Huawei P10. Sary an-gazety voasivana
Ary farany, ny Huawei P10 dia nandalo ny fanamarinana FCC ary voalohany amin'ny famelabelarana azy ao amin'ny Mobile World Congress 2017.
Huawei handefa ny finday avo lenta P10 ao amin'ny MWC
Ny Huawei P10 dia ho hita ao amin'ny Mobile World Congress raha nohamafisin'ny horonan-tsary mifono mistery manondro ny daty fandefasana, 26 Febroary.
Samsung hanambara ny andro fandefasana Galaxy S8 ao amin'ny MWC
Ao amin'ny Mobile World Congress, ny orinasa Koreana Samsung dia hampiharihary ny andro fandefasana ny Galaxy S8 mba tsy hamelana ny fanendrena ho very hevitra.
Mediatek's smartphone 30-core Helio X10 chip voalohany hita ao amin'ny MWC
Ny finday avo lenta voalohany misy fantsona folo amin'ny puce dia ilay avy ao Vernee izay hasehony ao amin'ny Mobile World Congress ary hanasongadinana ny puce Helio X30.
LG dia mirehareha amin'ny fanoherana ny rano sy ny fahamendrehana an'ny LG G6 amin'ny teaser vaovao
Ny LG G6 dia aseho ho iray amin'ireo kintana mamirapiratra amin'ny Mobile World Congress 2017 izay hatao amin'ny faran'ny volana ao Barcelona.
Nokia manokana 3 izay manondro fanodinana quad-core dia tafaporitsaka
Nokia 3 dia haseho ao amin'ny Mobile World Congress 2017 any Barcelona hiaraka amin'ny Nokia 6, Nokia 5 ary ny kinova Nokia 3310 malaza.
Sony Pikachu miaraka amin'ny puce octa-core, fakan-tsary 21MP ary Android Nougat dia hita ao amin'ny GFXBench
Ny Sony Pikachu dia nandalo GFXBench niaraka tamin'ny helio P20 octa-core chip, fakan-tsary 21MP ary RAM 3GB; izay mety ho mpandimby ny Xperia XA
Ny Samsung Galaxy Tab S3 dia mahazo ny sary tafaporitsaka voalohany
Ny Samsung Galaxy Tab S3 dia azo zahana amin'ny sary tafaporitsaka alohan'ny hahatongavany ao amin'ny Mobile World Congress 2017 ao anatin'ny herinandro.
Huawei P10 fandefasana voamarina ho an'ny MWC 2017
Ny MWC 2017 amin'ny farany dia hanasongadinana ny iray amin'ireo sainam-piandohan'ny taona, ny Huawei P10. Hanatrika ireo andro farany amin'ny volana febrily.
Hanomboka handefa telefaona finday Android 6 sy 3 vaovao ao amin'ny MWC 2017 ny HMD Global
Iray amin'ireo vavolom-bavan'ny MWC 2017 hafa koa ny HMD Global sy ny Nokia 6 ary finday Android vaovao telo izay hisarika ny sain'ny besinimaro manatrika.
Ny Lenovo Moto G5 dia ho mora kokoa noho ny teo alohany
Tsaho vaovao milaza fa hamely ny tsena amin'ny vidiny 5 euro ny Moto G189 ho an'ny maodely mahazatra ary 209 ho an'ny kinova miaraka 32 GB.
Gionee A1, ity no telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra izay ho hitantsika amin'ny MWC 2017
Gionee dia hitondra ny Gionee A1 mankany amin'ny MWC 2017, fitaovana iray tena feno izay hisongadina amin'ny kalitaon'ny famaranana sy ny vidiny mora
Ny Huawei Watch 2 dia hambara amin'ny 26 Febroary ao amin'ny MWC 2017
Ny 26 febroary no daty nofidian'ny Huawei hanolorana ny Huawei Watch 2, ilay marika mifandray manaraka izay azo raisina amin'ny marika sinoa.
Teaser LG G6 vaovao milaza fa 'tsy dia artifisialy' sy 'marani-tsaina'
Ny LG G6 dia hanana andro mahafinaritra amin'ny 26 Febroary rehefa aseho ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona. Manana teaser hafa izahay.
Samsung dia manomana zavatra lehibe, telefaona aforitra hanehoana izany ao amin'ny MWC
Raha mitady ny hahagaga ny namanao na ny fianakavianao ianao, ny fitaovana aforitra izay ananan'i Samsung dia mety indrindra amin'izany asa izany.
Sary vaovao an'ny Moto G5 Plus izay manamafy ny efijery 5,2 ″ 1080P, fakan-tsary 12MP sy maro hafa
Amin'ny 26 Febroary, ny Moto G5 sy Moto G5 Plus vaovao dia haseho ao amin'ny MWC. Izahay izao dia manana sary vaovao manamafy ny famaritana
Samsung Galaxy Tab 3, izao no fantatsika hatreto
Ity no fantatsika hatreto momba ny Samsung Galaxy Tab S3, takelaka vaovao an'ny mpanamboatra izay haseho ao amin'ny MWC 2017
Ny Asus ZenFone 4 dia afaka mametraka efijery 5,7 ″ QHD sy RAM 6 GB
Asus dia te-hanohy hahagaga amin'ny ZenFone 4, terminal izay hampiakatra ny efijery 5,7 "Quad HD ary RAM 6 GB.
LG dia mampiseho ny sisin'ny sisin'ny G6 amin'ny fanasana ofisialy ho an'ny MWC
LG dia mampiasa ny teny filamatra "efijery lehibe mifanentana" amin'ny fanasana ny G6 ho an'ny hetsika famelabelarana amin'ny 26 Febroary izay hatao ao amin'ny MWC
Samsung dia hamokatra singa bebe kokoa amin'ny Galaxy S8 Plus noho ny Galaxy S8
Ny antony dia ny taona lasa ny Galaxy S7 edge dia namidy mihoatra ny kinova Galaxy S7 mahazatra. Ka Samsung dia manaraka ny maodely famokarana mitovy
Samsung Galaxy Tab S3 dia ho tonga miaraka amin'i S Pen
Samsung dia hanambara ny takelaka Galaxy Tab S3 amin'ny 26 Febroary ao amin'ny MWC any Barcelona ary ho avy izy miaraka amin'ny S Pen sy kojakoja hafa
Samsung dia afaka mampiseho ny Galaxy S8 ao amin'ny MWC
Mandritra ny famelabelarana izay efa nalahatr'i Samsung ny 26 febroary ho avy izao dia hasehon'ny mpanamboatra ny Galaxy S8 amin'ny horonan-tsary
Samsung dia hanambara ny takelaka manaraka ao amin'ny MWC amin'ity volana ity
Samsung dia nanambara fa ny Galaxy Tab S3 dia amin'ny Mobile World Congress 2017 ihany amin'ny faran'ity volana ity.
Ny sary voalohany an'ny Honor 8 Lite dia voasivana alohan'ny MWC 2017
Ny MWC 2017 dia hanana ny laharany Huawei sy ny Honor 8 Lite, na dia marika fotsy an'ny mpanamboatra sinoa aza misy fiatraikany lehibe.
Samsung Galaxy Tab S3 Tablet Debut Voamarina ho an'ny MWC miaraka amin'ny SD820 / 4GB RAM
Efa fantatsika fa Samsung dia ho eo amin'ny MWC na dia misy takelaka iray aza, ny Samsung Galaxy Tab S3 izay ho tonga miaraka amina puce Snapdragon 820 sy RAM 4GB.
Miseho mamirapiratra amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra Tim Allen ny BlackBerry Mercury
Tim Allen ao amin'ny fizarana iray amin'ny The Last Man Standing, dia toa niantso an'i rahalahiny niaraka tamin'ny BlackBerry Mercury, finday marika Kanadiana ho an'ny MWC
Sony dia hanolotra smartphone vaovao miisa 5 amin'ny MWC 2017
Mazava i Sony fa te ho iray amin'ireo mpandray anjara amin'ny Kongresin'ny World Mobile 2017 fantatrao fa hanolotra maodely vaovao miisa 5 izy io.
Xiaomi amin'ity taona ity dia tsy ho ao amin'ny Mobile World Congress
Xiaomi dia tsy ho ao amin'ny Mobile World Congress 2017 amin'ny farany hahagaga ny rehetra ary rehefa nahalala ny zava-nitranga tamin'i Hugo Barra
Ity no mety ho sary ofisialy voalohany an'ny LG G6
Ny Verge dia manivana izay mety ho sary ofisialy voalohany an'ny LG G6 vaovao izay hasehon'ny orinasa Koreana Tatsimo amin'ny WMC 2017 any Barcelona
Vao avy nanamafy i Nokia fa ny sahaniny dia manana puce Snapdragon 835
Ny MWC dia mety tsy hahita ny iray amin'ireo kintana manjelanjelatra, ny sainan'i Nokia izay hahemotra amin'ny tsy fananana ny Snapdragon 835 nefa tafiditra ao.
Samsung dia tsy hanolotra ny Galaxy S8 amin'ny Mobile World Congress 2017
Na eo aza ny tsaho teo alohany, Samsung dia noraisiny mora ary tsy hanambara ny Galaxy S8 mandritra ny Mobile World Congress 2017 any Barcelona.
LG dia manambara hetsika manokana amin'ny 26 Febroary ao amin'ny MWC 2017
Ny orinasa Koreana Tatsimo LG no orinasa farany nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana hetsika iray manokana ao anatin'ny rafitry ny Mobile ...
Ny Xiaomi Mi 6 dia ho tonga amina kinova telo miaraka amin'ny chips roa samy hafa
Ny Helio X30 sy ny Snapdragon 835 no ho roa amin'ireo chips izay ho hita amin'ny karazany samihafa amin'ny Xiaomi Mi 6 rehefa aseho ao amin'ny MWC.
Motorola dia nanambara ny fisian'izy ireo tao amin'ny MWC 2017 ho an'ny 26 Febroary
Mikasa ny handefa terminal vaovao roa ao amin'ny MWC i Motorola. Efa fantatsika ny datin'ny 26 Febroary hitandrina azy io.
Nokia dia miandrandra ny fahatongavan'ny finday Android marobe ao amin'ny MWC 2017
Tamin'ny MWC 2017, terminal terminal Nokia marobe miaraka amin'ny Android no hita taorian'ny namoahana horonan-tsary iray an'ny Nokia 6 tao amin'ny pejy Facebook ofisialy.
Ny TLC dia mijanona antsasaky ny BlackBerry Mercury ao amin'ny CES, hanolotra azy ao amin'ny MWC
Farafaharatsiny mba manana sary tena izy momba ny atao hoe BlackBerry Mercury isika, terminal misy keyboard QWERTY ara-batana miaraka amin'ny Android ary ho hitantsika ao amin'ny MWC
Sony hamoaka ny andian-tsarimihetsika Xperia vaovao ao amin'ny MWC 2017
Ilay mpanamboatra Japoney Sony dia efa manana fitaovana roa natao ho fampisehoana amin'ny Mobile World Congress 2017 izay hatao any Barcelona.
Nokia dia hanatrika ny MWC 2017
Nokia dia manamafy ny fanatrehany ny MWC 2017, foara telefaona lehibe indrindra izay hatao ny 27 febroary hatramin'ny 2 martsa ao an-tanànan'i Barcelona
Apple dia hanatrika ny Mobile World Congress 2017 manaraka
Ny Kongresin'ny World Mobile 2017 manaraka izay hatao any Barcelona dia hanana vahiny manokana: ny fisian'i Apple.
LG Tone Platinum, headphones tsy misy tariby tena mahatohitra
Fihetseham-po voalohany taorian'ny nanandramany ny kabary tsy misy tariby LG Tone Platinum, fitaovana miavaka amin'ny kalitaon'ny famaranana sy ny endrika mahaliana
LG Rolling Bot, nanandrana ny robot BB-8 an'i LG izahay
Ity ny LG Rolling Bot, gadget curiso iray mitovy amin'ny BB-8 ary miaraka amina fakan-tsary 8 megapixel ahafahantsika mivezivezy amin'ny alàlan'ny finday Android.
LG Cam Plus Grip, izao no fiasan'ny modely fakantsary LG G5
Asehonay aminao ny fomba fiasan'ny LG Cam Plus Grip, modely iray manome hery ny fakantsary LG G5.
Atorinay anao ny fomba fanovana ny modules an'ny LG G5
Asehonay aminao amin'ny horonantsary ny fomba hanovana ny maodelin'ny LG G5 haingana sy mora mba hampiasa ny mason-kodiny azo esorina.
Marina fa ny ankamaroan'ny mampiavaka azy ara-teknika dia tsiambaratelo misokatra, ny mpanamboatra ary
Izany no fiasan'ny fakantsary Mydlink 180 degre
Androany izahay dia mampiseho aminao ny fomba fiasan'ny fakantsary Mydlink 180 degre, andian-tsarimihetsika izay azontsika fehezina amin'ny fotoana tena izy amin'ny finday
Manadihady izahay Zhao Gang, talen'ny varotra manan-kaja
Resadresaka nifanaovana tamin'i Zhao Gang, Tale Jeneraly Varotra, izay milaza amintsika ny fahombiazan'ny orinasa tany Espana
Real reality, ilay tena mpiorina amin'ny fanontana farany an'ny MWC
Ny alakamisy lasa teo dia nifarana ny andiany farany an'ny Mobile World Congress. Ankehitriny, aorian'ny fihenam-bidy aorian'ny hetsika dia te handinika ny ...
Gionee Marathon M5 Plus, phablet sinoa manana famaranana tsara
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Gionee Marathon M5 Plus ao amin'ny MWC, phablet izay miavaka amin'ny famaranana, ny sensor sensor ary ny fizakan-tena maharitra roa andro
Gionee S6, terminal mahery misy famaranana kalitao
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Gionee S6 ao amin'ny MWC, telefaona iray mahavoa ny tsena amin'ny vidiny 265 euro eo ho eo
Manadihady izahay Carlos Gómez, Talen'ny Waze Europe izay manambara ny tsiambaratelon'ny orinasa amin'ny fitomboana tsy tapaka
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny Zopo Speed ​​8, ny sainam-bokatra vaovao an'ny mpamokatra izay misongadina amin'ny fahombiazany sy ny vidiny nohitsy: 299 euro
Sony Xperia X Performance, ity no titan vaovao an'i Sony
Notsapainay ny fampisehoana Sony Xperia X tao amin'ny Mobile World Congress, ilay sainam-pianakaviana vaovao X izay nandeha mafy.
Sony Xperia X, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary
Amin'ity horonantsary ity dia asehonay anao ny fiheveranay voalohany taorian'ny fitsapana ny Sony Xperia X, mpikambana ao amin'ny fianakaviana Xperia X vaovao an'i Sony
ZTE Axon Mini, notsapainay ho anao izany
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny ZTE Axon Mini ao amin'ny MWC, finday avo lenta misy famaranana kalitao ary fakan-tsarimihetsika
ZTE Spro Plus, ity no tetik'asa pico vaovao an'ny mpanamboatra aziatika
ZTE Spro Plus, takelaka mahaliana miaraka amina projecteur pico misy fiasa tena mahaliana.
ZTE Nubia My Prague, hevitra voalohany
Fihetseham-po voalohany taorian'ny fitsapana ny ZTE Nubia My Prague nandritra ny MWC 2016, telefaona misy famaranana tsara sy endrika tsara tarehy
Ny zava-misy virtoaly an'ny Samsung sy HTC miaraka amin'ny Gear VR sy Vive izay hitantsika tao amin'ny MWC
Samsung sy HTC no mpilalao roa lehibe indrindra amin'ny zava-misy virtoaly ao amin'ny Mobile World Congress miaraka amin'ny Gear VR sy Vive
Ireo gadget mifandraika amin'ilay 'Internet of Things' avy amin'ny LG, Sony ary Xiaomi izay nandalo ny MWC
LG, Sony ary Xiaomi fitaovana nifandray dia namakivaky ny Mobile World Congress hitondra antsika amin'ny Internet of Things
Napetrakay nifanatrika mivantana ny finday voalohany LG G5 sy ilay Xiaomi Mi 5 mahavariana, samy hita ao amin'ny MWC
Manadihady izahay Víctor Planas, CEO an'ny Zopo Iberia
Resadresaka nifanaovana tamin'i Víctor Planas, Tale Jeneralin'ny Zopo Iberia, izay nanambarany ny tsiambaratelon'ny orinasa iray tonga tany Espana nanitsaka ny tany
Izany no fiasan'ny rafitra fanamafisana sary ao amin'ny Huawei Mate 8
Izahay dia mitondra anao ny tsiambaratelo rehetra momba ny rafitra fanamafisana sary ao amin'ny fakantsary huawei mate 8, ilay phablet vaovao an'ny mpanamboatra aziatika.
Xiaomi dia manambara ny Mi 4S, filokana lehibe hafa an'ny mpanamboatra sinoa latsaky ny € 260
Xiaomi dia miatrika andro mahafinaritra aorian'ny fampisehoana ny Mi 5 ao amin'ny MWC any Barcelona. Anaovy doka ny Mi 4D amin'ny € 260
Xiaomi dia manolotra ny Mi 5 miaraka amin'ny efijery 5,15 ″, Snapdragon 820 ary sensor an'ny dian-tànana
Xiaomi dia nanolotra ny Mi 16 ao amin'ny MWC5 avy amin'i Hugo Barra izay nanao fampisehoana tena tsara tamin'ny antsipirihany.
Huawei GX8, fiheverana voalohany amin'ny horonan-tsary
Huawei GX8 dia finday mifantoka amin'ny tsena amerikana latina miaraka amina endri-javatra tena tsara
Eny, ny fakantsary Xperia X dia maka sary haingana be
Aorian'ny fijerena ity horonantsary ity dia ho hazava tsara fa ny fakan-tsary Sony Xperia X dia manana potika betsaka raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy
Antonio Navarro, Tale Jeneralin'ny D-Link Iberia, dia mampiseho aminay ny vahaolana arosony mba hifehezana ny tranonao
Atorinay anao ny fomba hibaiko ny tranonao amin'ny alàlan'ny vahaolana amin'ny automatisation an'ny home mydlink Home android.
Huawei MediaPad M2, nanandrana ny takelaka 8-inch an'ny Huawei izahay
fahatsapana voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei Mediapad 2, ilay phablet vaovao izay nentin'i Huawei tao amin'ny MWC 2016
karazana fitsangatsanganana virtoaly mamaky ny MWC2016 izay mitranga ao an-tanànan'i Barcelona.
Samsung dia handefa ny sisin'ny Galaxy S7 sy S7 any amin'ny firenena 60 amin'ny 11 martsa. Finday iray izay antenain'izy ireo hizara singa maherin'ny 40 tapitrisa manerantany
Ny vidin'ny Sony Xperia X sy Xperia XA dia naseho tany Eropa, azo amidy mialoha
Androany dia efa fantatsika ny vidin'ny Sony Xperia X sy Xperia X taorian'ny nanolorana azy ireo omaly tao amin'ny MWC
Izahay dia manome anao ny fiheverana voalohany taorian'ny fitsapana ny Huawei Mate 8 ao anatin'ny rafitry ny Mobile World Congress 2016.
Samsung Gear 360 dia sehatry ny lantira roa izay manome zoro fandraisam-peo 180 degre ka ny fakan-tsary Samsung dia mamela anao hanoratra amin'ny 360 degre.
Fihetseham-po voalohany amin'ny horonantsary taorian'ny nanandramany ny Samsung Galaxy S7, ny sainan'i Samsung vaovao izay misy vaovao tena mahaliana
Acer dia nanolotra ny filokana roa vaovao ao amin'ny MWC: Liquid Z630s sy Liquid Zest
Ny mpamokatra sinoa ZTE dia naneho ny ZTE Blade V7 sy Blade V7 Lite ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona.
HTC dia mamoaka finday finday Desire 530, 630 ary 825
Tao amin'ny MWC HTC dia nanambara finday finday vaovao telo ho an'ny ambany sy antonony: Desire 530, Desire 630 ary Desire 825
Samsung dia nanambara ny Galaxy S7 sy S7 Edge miaraka amin'ny fakan-tsary 'Dual Pixel', fampisehoana 'On On' ary micro micro SD
Ny Galaxy S7 sy S7 Edge vaovao an'ny Samsung dia naseho tao amin'ny MWC. Antsika rehetra ny fampahalalana.
Hetsika fanolorana ofisialy ny Xiaomi Mi5 mivantana avy amin'ny MWC16
Manomboka eto dia azonao atao ny mijery ny hetsika fampisehoana ny Xiaomi Mi5 mivantana amin'ny alàlan'ny Streaming avy amin'ny MWC16 any Barcelona.
LG dia manolotra ny LG G5, finday avo lenta voalohany miaraka amin'ny CAM Plus, Hi-Fi Plus, 360 VR, 360 CAM ary Rolling Bot
LG dia maneho ny hatsarana sy tombontsoa azo avy amin'ny finday avo lenta voalohany miaraka amin'ny LG G5 manokana.
Samsung Unpacked 2016 mivantana avy amin'ny MWC16
Mivantana mivantana avy amin'ny MWC16 hijerena ny hetsika Samsung Unpacked 2016 ary hahafantatra ny zava-baovao rehetra momba ny Samsung Galaxy S7
Ireo no vaovao rehetra ho hitantsika amin'ny MWC 2016
Amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny vaovao rehetra ho hitanay ao amin'ny MWC 2016, miaraka amin'ireo fampisehoana mpamokatra lehibe toa an'i Samsung na Huawei
ARCHOS dia manambara ny Diamond 2 Plus miaraka amin'ny 5,5 ″ 1080p Display, RAM 4GB ary Android 6.0 Marshmallow
Archos dia nanambara telefaona vaovao miaraka amin'ny Diamond 2 Plus miaraka amin'ny efijery 5,5 ", Android 6.0 Marshmallow ary RAM 4GB.
"Haingam-pandeha", teny filamatr'ilay teaser ofisialy ny Mi 5 avy amin'ny Xiaomi
Teaser ofisialy an'ny Xiaomi Mi 5 izay mirehareha amin'ny hafainganam-pandehan'ity terminal ity izay ho hitantsika amin'ny herinandro ambony ao amin'ny MWC
Archos dia manambara tabilao 7, 8 ary 10 vaovao vaovao telo ao anatin'ny MWC 2016 miaraka amin'ny Android 6.0 ary latsaky ny € 159
Archos dia hanolotra takelaka telo ao amin'ny MWC hatao any Barcelona: 70 Oxygen, 80 Oxygen ary 101b Oxygen miaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow
Ny famaritana bebe kokoa momba ny Xiaomi Mi 5 dia voasivana alohan'ny fampisehoana ofisialy azy
Efa fantatsika ny zava-drehetra momba ny Xiaomi Mi 5 manana an-tànana ny pitsony feno amin'ity terminal vaovao ity izay haseho ao amin'ny MWC
Ny Samsung Galaxy S7 dia voasivana amin'ny horonantsary 14 segondra
Mpampiasa iray no nampakatra horonantsary tao amin'ny YouTube izay ahitana ny Samsung Galaxy S7 mandritra ny 14 segondra
LG dia nanambara mangingina ny K8, telefaona misy efijery 5-inch ary Android 6.0 Marshmallow
AnTuTu: ny Samsung Galaxy S7 misy Snapdragon dia 20% mihoatra ny maodely miaraka amin'ny Exynos SoC
Ny fanolorana ny Samsung Galaxy S7 sy ny Samsung Galaxy S7 Edge dia efa akaiky fotsiny. Ny manaraka…
LG Stylus 2 dia nanambara tamin'ny efijery 5,7-inch, Android 6.0 ary rafitra vy
Amin'ny Alahady LG dia hanolotra ny Stylus 2 ho telefaona manokana miaraka amin'ny efijery 5,7 "ary ny stylus ho fitakiana ambony indrindra.
Nisy fivoahana nilaza fa hanana efijery faharoa ny LG G5
Tahaka ny V10, ny LG G5 dia hanana efijery faharoa arakaraka ny iray amin'ireo loharano azo antoka indrindra amin'izao fotoana izao, @evleaks
Lenovo hanolotra telefaona vatana vy amin'ny MWC
Lenovo dia hanolotra telefaona misy vatana vy ao amin'ny MWC. Sa dikan-tsoratry ny Lenovo Lemon 3 mikendry ny tsenan'i India
Samsung dia naneho ny zava-baovao farany amin'ny tontonana izay ho hitantsika amin'ny Android 6.0 Marshmallow sy ny Galaxy S7 manaraka
Ho an'ny volana martsa dia hanana eny an-tsena ireo finday LG vaovao: X Cam sy X Screen izay ho hita eo amin'ny MWC.
Andro vitsy taorian'ny fampisehoana ny LG G5 sy Samsung Galaxy S7 dia misy toetra maromaro zarain'ireto telefaona roa ireto
ARCHOS 50d Oxygen dia nanambara tamin'ny fampisehoana 5 ″ 1080p, puce oct-core MediaTek ary fakan-tsary 13 MP
ARCHOS dia manolotra Oxygen 50d mahaliana izay manana efijery 5 ", puce MediaTek octa-core ary fakan-tsary 12 MP.
Xiaomi mpiara-manorina dia mampiseho ny kalitaon'ny sary an'ny MI 5 amin'ny sary roa
Andro vitsy taorian'ny MWC, Xiaomi dia namoaka sary roa nalain'ny Mi 5 izay nahitana voromahery nanidina
LG dia manolotra ny efijery "mandeha foana" an'ny G5 amin'ny teaser iray
Ny fiasa "mandeha foana" eo amin'ny efijery G5 dia iray amin'ireo mistery hovahantsika ny 21 febroary miaraka amin'ny fanampian'ny LG ao amin'ny MWC
Nanivana ny sarin'ny sisin'ny Galaxy S7 miampy ny isa AnTuTu
Androany isika dia manana ny sary voalohany sy ny isa AnTuTu an'ny sisin'ny Galaxy S7 vaovao izay haseho amin'ny 21 febroary ao amin'ny MWC
Gaga ihany, GFXBench nanambara fa ny Xiaomi Mi 5 dia hanana kinova 5,7 ″
Ny efijery 5,7 "no asehon'ny GFXBench rehefa nandalo ny Xiaomi Mi 5 haneho ny heriny sary
Amin'ny 21 febroary, ny LG's G5 sy ny Samsung Galaxy S7 dia haseho fahasamihafana eo anelanelan'ny hetsika roa
Samsung dia nanambara ny hetsika Unpacked ho an'ny 21 Febroary izay hanolorany ny Galaxy S7
Samsung dia nanambara ny hetsika Unpacked ao amin'ny MWC izay hanehoany ny Galaxy S7 vaovao sy ny terminal hafa
Tsy niavaka i Sony indrindra nandritra ny fanontana farany an'ny CES tany Las Vegas. Ny fizarana finday ...
Araka ny tsaho vaovao dia hiakatra ny vidin'ny Galaxy S7 noho ilay scanner iris
Ny scanner iris no tompon'andraikitra amin'ny fiakaran'ny vidin'ny Samsung Galaxy S7 izay haseho ao amin'ny Mobile World Congress any Barcelona
Samsung dia afaka nanolotra ny Galaxy S7 amin'ny MWC 2016
Ny orinasa Koreana Samsung dia afaka nanolotra ny sahaniny manaraka, ny Galaxy S7, mandritra ny Mobile World Congress 2016 any Barcelona.
Lahatsoratra momba ny hevitro izay anazavako ny antony heveriko fa ny Samsung Galaxy S6 ho telefaona tsara indrindra ao amin'ny MWC 2015
Famerenana amin'ny # MWC15 an'ny Sony Smartwatch 3. Ireo no hevitro manokana
Eto ianao manana ny Review avy amin'ny MWC15 amin'ity Sony Smartwatch 3, izay azo antoka fa ny smartwatch Android Wear tsy dia manintona indrindra amin'izao fotoana izao.
Honor Holly, ny finday avo lenta Huawei izay hifaninana amin'ny Moto E
Raha mitady terminal Android mora vidy miaraka amina endri-javatra tsara ianao, aza hadino ny fanadihadianay momba ny Honor Holly, finday avo lenta izay latsaky ny € 130
Siswoo dia marika vaovao an'ny smartphone Android Espaniola natolotra tao amin'ny MWC 2015
Siswoo dia marika vaovao an'ny smartphone Android Espaniola izay natolotra tao amin'ny Mobile World Congress
Samsung Galaxy S6, ny antsipiriany rehetra momba ny fakantsary mahery
Asehonay anao ny pitsopitsony rehetra sy ny tsiambaratelon'ny fakantsary mahery an'ny Samsung Galaxy S6, ny tsara indrindra eny an-tsena?
Notsapainay ny ZTE Blade Star 2, fantsona miavaka amin'ny rafitry ny baikon'ny feony. Na dia tsy misy afa-tsy amin'ny teny anglisy sy sinoa ihany izy io.
Huawei Watch no azo ampiasaina amin'ny Android Wear natolotr'ilay mpanamboatra sinoa ao amin'ny Mobil World Congress
Tonga any amin'ny tsena eropeana i Kyocera miaraka amin'ny Torque ultra-mahatohitra izay mahafeno ny fepetra 810G an'ny miaramila
Androany manomboka amin'ny MWC15 any Barcelona, ​​dia atolotray an'i Filip, ilay Smartwatch ho an'ny ankizy izay atolotry ny Telefónica tsy ho ela hanana ny kely indrindra amin'ny trano.
HTC One M9, miaraka amin'ny Snapdragon 810 SoC, tafahoatra ao amin'ny MWC
HTC One M9 miaraka amin'ny Snapdragon 810 SoC mandritra ny MWC 2015 dia nijaly tamin'ny olana tafahoatra. Manana olana amin'ny Snapdragon 810?
Hisense King Kong dia telefaona manintona ny saina ho amin'ny fanoherany ny hatairana tampoka sy ny fahalavoana
Izahay dia mamakafaka ny ZTE Blade S6, terminal iray miaraka amina processeur Qualcomm Snapdragon 615 ary fakan-tsary 13 megapixel amin'ny vidiny mora: 200 euro.
Ity no ho loko isan-karazany an'ny Samsung Galaxy S6 sy Samsung Galaxy S6 Edge
Tamin'ny 1 martsa lasa teo, nanolotra mpikambana vaovao roa an'ny fianakaviana Galaxy ao Barcelona ny mpanamboatra Koreana ...
Ny faritra Xperia Z iray manontolo dia hanana ny ampahany amin'ny Android 5.0.2 Lollipop ho an'ny volana martsa, ho santatry ny horonantsary Xperia Z3
Blackphone dia tonga amina modely vaovao roa, takelaka misy ny Blackphone + ary smartphone miaraka amin'ny Blackphone 2
Ny Sony Xperia M4 Aqua dia nambaran'ny orinasa Japoney tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny Mobile World Congress
Sony Xperia Z4 Tablet izao dia ofisialy miaraka amin'ny efijery 10.1 ″ 2K sy chip Snapdragon 810
Sony dia nanambara ny fitaovana vaovao Xperia Z4 Tablet misy fàfana 10.1 "sy chip Snapdragon ao amin'ny Mobile World Congress
Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny HTC One M9
Tonga ny fanolorana ofisialy ny HTC One M9, ny sainam-pirenen'ny Taiwaney mpanamboatra izay hifaninana amin'ny S6 ao amin'ny MWC
Niverina tamin'ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S6 Edge isika, finday avo lenta voalohany misy efijery miolaka roa sosona, ary izao no fiheveranay.
Tonga ihany ny fampisehoana ny Samsung Galaxy S6, ary ny fahatsapana dia tsy tokony ho tsara kokoa. Samsung ve no ho mpandresy lehibe amin'ny MWC 2015?
MWC 2015, ireo no vaovao antenainay amin'ny foibe telephony lehibe indrindra
Akaiky kely ny MWC 2015 ka izahay no mitondra famintinana ny vaovao rehetra ho hitanay amin'ity hetsika telephony manan-danja ity
LG Watch Urbane, rindrambaiko metaly amin'ny Android Wear
Ny LG Watch Urbane dia azo zahana boribory miaraka amin'ny fijery mahazatra izay manana ny Android Wear ho rafitra fiasa ary haseho ao amin'ny MWC 2015
Huawei dia hanolotra ny takelaka MediaPad X2 ao amin'ny MWC
Ny Mobile World Congress dia fanendrena tsy azo ihodivirana ho an'ny orinasa maro, toa an'i Huawei, izay hanolotra ny takelaka MediaPad X2 vaovao
Ao amin'ny MWC 2015 manaraka dia afaka jerentsika ny telefaona Ubuntu vaovao novokarin'i Meizu miaraka amina toetra ara-teknika narahina tamin'ny Meizu MX4.
Sony eo afovoany vaovao dia miseho amin'ny GFX Bench Sony Xperia E4 eo imasony?
Ny zana-kazo an'ny Sony Xperia E4 dia voasivana, mpikambana vaovao amin'ny laharana Xperia izay haseho ao amin'ny MWC 2015
Tonga i Polaroid resy lahatra ny amin'ny fahombiazany tao amin'ny MWC 02015. Ho an'izany dia manolo-tena izy ny hanolotra smartphone tsy latsaky ny efatra amin'ny sokajy samihafa.
Famaritana sy sary an'ny Lenovo Vibe Z3 Pro izay haseho ao amin'ny MWC 2015
Ny Lenovo Vibe Z3 Pro dia haseho ao amin'ny Mobile World Congress 2015 izay hanana ny fanendrena azy amin'ny voalohan'ny volana martsa
HTC Desire 626, haseho ao amin'ny MWC 2015 ve izany?
Navoaka ireo sary voalohany an'ny HTC Desire 626, mpikambana vaovao ao amin'ny fianakavian'ilay Desire an'ny mpamokatra Taiwanese.
Ny smartwatch HTC voalohany dia hiaraka amin'ny M9 Flagship vaovao ao amin'ny MWC 2015
Ity smartwatch HTC ity dia hiaraka amin'ny M9 flagship vaovao, izay hanaraka ny endrika mitovy hita tamin'ny taona lasa tsy nisy fahagaga.
LG dia afaka nanolotra ny LG G Watch R2 manararaotra ny fahatongavan'ny MWC 2015 ho an'ny tanànan'i Barcelona
Fahadisoam-panantenan'ny MWC14: Efa nanao fety ve ireo mpanamboatra antsika tamin'ny famoahana farany azy ireo?
Moa ve tsy nahomby ireo mpanamboatra lehibe tamin'ny smartphone natolotr'izy ireo? Ity sombin-kevitra ao amin'ny MWC14 ity dia taratry ny hevitro.
Samsung, ny fahadisoam-panantenan'ny MWC 2014
Samsung dia tsy isalasalana fa ny fahadisoam-panantenana lehibe tamin'ity fanontana MWC 2014 vao vita ity, ary ilay multinational lehibe dia nandalo tamim-pahanginana namakivaky an'i Barcelona
MWC 2014, Huawei Ascend Mate2, phablet tena mahaliana amin'ny horonan-tsary
Mihamaro ny mpampiasa mitady phablet mora vidy ary Huawei dia manana ny va